SADC Troika Inozeya Zviri Kunetsa muMozambique
SADC Troika 3
Komiti yesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community, SADC, inoona nezvematongerwo enyika, kuzvidzivirira pamwe nekuchetedzeka kwedunhu, kana kuti SADC Troika Organ on Politics, Defense and Security yasangana muHarare neChipiri ichizeya nyaya yematororo anonzi anetsa kuMozambique.
Vachitaura pamusangano uyu, uyo waitirwa paState House muHarare, mutungamiri wenyika uye vari sachigaro wekomiti iyi, VaEmmerson Mnangagwa, vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose.
Vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika, VaSibusiso Moyo, vati Troika Organ on Politics, Defense and Security yeSADC yabvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaLuke Tamborinyoka, vati Zimbabwe haikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika vachiti hurumende yaVaMnangagwa irikuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe.
Zvichakadai, VaMoyo vatiwo musangano wekomiti yeSADC watarisawo zviri kuitika kuLesotho uko mutungamiri wehurumende yeko, VaThomas Thabani, vasiya basa vakakurudzira kuti kuchichanjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka.
VaThabani vakatarisana nenyaya yekunzi vakakonzera kufa kweaimbova mudzimai wavo.
Musangano weTroika waitwa zvechimbichimbi pachityorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere cheCovid19.
Vapinda musangano uyu naVaMnangagwa ndiVaEdgar Lungu vanove mutungamiri weZambia, VaMokgweetsi Masisi vanove mutungamiri weBotswana pamwe nemutungamiri weMozambique, VaFilipppe Jacinto Nyusi, avo vakokwa nekomiti iyi kuti vazoiturira mamiriro akaita zvinhu kuMozambique zvichitevera musanganao wavakaita naVaMnangagwa kuChimoio mwedzi wapera.